Saịtị na-ebido ngwa ngwa. Enweghị m ike ịgwa gị oge ole m natara ozi a kemgbe ọtụtụ afọ mgbe mụ na ndị ahịa na-arụ ọrụ. Ọsọ saịtị dị oke mkpa… ọ nwere ike belata bounces, mee ka ndị ọbịa tinye aka na ha, mee ka saịtị gị ka mma na Google, na-eduga n'inwekwu mgbanwe. Anyị hụrụ saịtị ngwa ngwa n'anya… ọ bụ otu n'ime nsogbu izizi anyị na ndị ahịa na-awakpo (yana kwa ihe kpatara anyị ji anabata ya WordPress na Flywheel - nke ahụ bụ njikọ njikọta).
Inweta ihe edeturu na saịtị ahụ adịghị ngwa na-akụda mmụọ n'ihi na ọ nwere ike ịdabere na ọtụtụ narị nsogbu… ole bandwidị ụlọ ọrụ gị nwere, mmadụ ole na-eji ya, ihe ntanetị nke ị na-eme, ihe nchọgharị ị na-agba, ihe nchọgharị tinye-ons na-agba ọsọ, ma ọ bụ saịtị echedoro, ebe akwadoro ngalaba gị, ebe akwadoro saịtị ahụ, ọtụtụ saịtị ndị ọzọ na-ebu otu onye ọrụ ahụ, otu sava gị si echekwa saịtị ahụ ma ọ bụrụ na ị kesara ihe enyemaka dị na CDN ole na ole aha.
Ọ gaghị ekwe omume ịkọpụta ihe nsogbu nwere ike ịbụ mgbe ndị ahịa anyị bịakwutere anyị jụọ anyị. Yabụ, anyị na-agakarị na saịtị dịka Pingdom ma gbaa ọsọ ngwa ngwa ma gosi ha na onye ọ bụla na-abụghị ha enweghị nsogbu. N'ezie, ọ bụ mgbe ha ga-alọghachi gwa anyị na onye ọ bụla ha maara nwere nsogbu na-enwekwa ume.
Na nyochaa gá »‹ na peeji nke á »sá» site na Google Search njikwa (Labs ngalaba) bá »a njiká»… á »dabere na ndá» ‹mmadá» running na-agba á »rá» tool toolbar na-akuko na-agba. Enweghị ọtụtụ ebe ị nwere ike ịga nweta azịza ziri ezi. Ma ọ bụ n'ebe ahụ? Nghọta nke Torbit bụ ezigbo njiri mara onye ọrụ na-agbakwunye nghọta na weebụsaịtị gị nwere ike ọ bụghị naanị ịnye azịza ya, kamakwa ngwọta. Ọ na - enye gị ohere iberi ma gbue ma ndị ọbịa gị yana saịtị gị iji hụ ezigbo foto ọsọ ọsọ nke saịtị gị.
Nghọta nke Torbit na-eme ka ezigbo usoro ihe eji arụ ọrụ, na-ekwe ka marketer ahụ nyochaa oge webpage na-ebu maka ndị ọbịa ọ bụla. Ngwá ọrụ ahụ na-akụda ozi iji tụọ ebe ebe ibe weebụ na-adị ngwa, na ihe kpatara ya. Otu mkpebi nke abụọ na-eme ka data dị adị ozugbo.
Ngwá ọrụ ahụ na-enye maka matrik dị omimi dị ka mmekọrịta dị n'etiti ọsọ ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ na ọnụego bounce ma ọ bụ ọnụego ntụgharị, ezigbo data na-akọ akụkọ na nlele map dị ndụ, akụkọ ihe mere eme nke oge onye ọrụ na metrics dị ka median na elu percentiles, iji tụnyere arụmọrụ n'ofe dị iche iche nchọgharị na ala, na ahaziri aro maka etu esi arụ ọrụ ọfụma, ha niile nwere pacenti narị. Ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ na saịtị WordPress, ịnwere ike ibili ma na-agba ọsọ ọsọ na ha WordPress ngwa mgbakwunye.
Site na ozi a, ị nwere ike ịchọpụta ma ntinye nke koodu ọhụụ mere ka webụsaịtị gị dị nwayọ nwayọ, ma ihe kpatara ya bụ ihe nkesa karịrị ya, ma ọ bụ… gosipụtara onye ahịa gị na ị na-arụ ọrụ gị ma saịtị ahụ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Ọ dịkwa mma ịlele oge ibu na mpaghara, yana!
Ọnụahịa ahụ dịkwa mma. Ihe bụ isi version nke Nghọta nke Torbit, gụnyere 100 pasent nlele maka ihe ruru 1,000,000 nlele kwa ọnwa na njigide data ụbọchị 30, na-abịa n'efu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgbanye n'ime nsogbu ahụ, lee nleta kachasị mma na ọ kachasị njọ, ma ọ bụ ọbụlagodi ntụgharị site na oge ibu, ngwa ahụ chọrọ nwelite.
Tags: ife efendị webmasters googleibe peejingwa ileba anyanlekota ngwa ngwanchọpụta nsogbu ọsọmpiezi ucheweta
Daalụ maka ozi a Doug, nke a bụ n'ezie ọrụ dị oke mma na-atụle mkpado ọnụahịa.
Bet nzọ @ twitter-353825851: disqus! Echekwara m ya, kwa !!!
Jun 7, 2012 na 9:34 AM
I nweghi ike ileda mkpa nke oge ibu nke weebụsaịtị gi. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọdịnaya na imewe gị dị ukwuu, ọ bụrụ na ọ na-ebu nwayọ nwayọ ị ga-atụfu ndị ọbịa. Igwe ọchụchọ ahụ na-akwado weebụsaịtị ndị na-enye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Jun 9, 2012 na 2:34 AM
Doug, ọ dị mma ịnụ na ị na-eji Torbit Insight na ịchọta na ọ bara uru. Daalụ maka isiokwu ahụ!